एमालेका युवा-विद्यार्थीहरू स्थानीय चुनावमा को कहा बाट उठ्दै छन्? – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
एमालेका युवा-विद्यार्थीहरू स्थानीय चुनावमा को कहा बाट उठ्दै छन्?
चैत्र २४, २०७३ ०७:०१ मा प्रकाशित
इसरोकार संवाददाता काठमाडौं, चैत २४–सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनामा केन्द्रीत भएका छन् । दलहरु आआफ्ना पार्टीका घोषणा पत्र लेख्ने देखि उम्मेद्वार छनौटमा समेत जुटिसकेका छन् ।
यसैक्रममा एमालेले स्थानीय तहकोलागि मापदण्ड,समय सीमा तोकेको छ । यति मात्रै नभई सो पार्टीले एक तहको निर्वाचनमा भाग लिनेले बाँकी दुई तहको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने नियम समेत बनाएको छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा एमालेका युवा विद्यार्थीहरुको पनि यो पटक उम्मेद्वारी पर्ने देखिएको छ ।
एमालेका विभिन्न भातृ संगठनमा रहेका युवाहरु र विशेषत युवासंघ र विद्यार्थीहरु स्थानीय तहको निर्वाचनमा आकांक्षी देखिएका हुन् । एमालेको शक्तिशाली भातृसंगठनमा युवासंघ र विद्यार्थीलाई लिइन्छ । यी दुबै संगठनमा भएका युवाहरु अहिले देशभरीका स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदार हुने तयारीमा लागेका हुन् ।
युवासंघका राजीव पहारी र दिलकुमारी पन्त कास्कीको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मेयरको आकांक्षी छन् । त्यस्तै अखिलका कार्यवाह अध्यक्ष रश्मी आचार्यपनि त्यहि महानगरपालिमा मेयरको आकांक्षी छन् ।
युवासंघका प्रचार विभाग प्रमुख हस्त शाही पनि हुम्लामा गाँउपालिकाको उम्मेदारीको तयारीमा छन् । केन्द्रीय सदस्य कमल ढकाल गण्डकी गाँउपालिकामा अध्यक्षको दाबी गरीरहेका छन् । युवासंघका सचिव अशोक चन्द कंचनपुरको बेतकोट नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदार उठ्ने चर्चा छ भने सुरेन्द्र राई र राजु गुरुङ बुटवल नगरपालिकाबाट मेयरको लागि उम्मेदारी दिँदै छन् । भाइकृष्ण बलामी चन्द्रागिरी नपाबाट उम्मेदारी दिँदै छन् ।
विद्यार्थीबाट अमृत बुढा रौल्पाबाट निर्वाचन लड्ने तयारीमा छन् । माधव पन्त शुक्लाफाटा नपा कंचनपुरमा मेयरमा उठ्ने तयारीमा छन् । टिकाजंग थापा सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्षमा उम्मेदारी दिने तयारीमा छन् भने विरुउदास श्रेष्ठ सोलुखुम्बुको दिपकुण्ड नपाबाट मेयरमा लड्ने तयारीमा छन् ।
सुवित थपलिया लमजुङको राइनास नपाबाट मेयरमा उठ्दै छन् । जेनिस लामा काभ्रेको तिमाल गाँउपालिकाबाट अध्यक्षको तयारीमा जुटेका छन् । प्रफुल्ला मन्सुर कलैया उपमहानगरपालिकाबाट लड्ने तयारीमा हुँदा केशव चाम्लिङराई उदयपुरको रैतामाइ गाँउपालिकाबाट अध्यक्षमा उठ्ने तयारीमा छन् ।
अहिलेका युवाहरु राजनीतिक रुपमा केहि गरेर देखाउन चाहन्छन् भन्ने सन्देश पनि यो निर्वाचनमा युवाको सहभागीताले देखाएको छ ।